२०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार ११:२२:००
चीनको आर्थिक वृद्धिदर घट्नुमा उसले अपनाएको कठोर कोरोना नियन्त्रण नीति मात्रै जिम्मेवार छैन
सन् २०२१ को प्रारम्भमा विश्वका प्रमुख २५ बैंक तथा अन्य व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताले एक स्वरमा चिनियाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर यो वर्ष ८.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । त्यस बखत चिनियाँ सरकार आफैँले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ६ प्रतिशत मात्र लिएको थियो । चिनियाँ सरकारले कमजोर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकाले धेरै विश्लेषक अचम्मित भए । आखिर बाह्य संस्थानले त्यस्तो के महत्वपूर्ण पक्ष छुटाइरहेका थिए ? कि चिनियाँ सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई समेत असर पर्ने कुनै कदमबारे पहिलेदेखि सोचविचार गरिरहेको थियो ?
पछिल्लो समय चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्ताएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले चीनको वार्षिक आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण संशोधन गरेका छन् । तेस्रो त्रैमासिक वृद्धि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.९ प्रतिशत मात्र रह्यो । जबकि पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा १८.३ प्रतिशत र ७.९ प्रतिशतको बलियो वृद्धि थियो । कोरोना भाइरसका कारण सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएकाले पनि यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकको वृद्धिदर उच्च देखिन सम्भव भएको हो । तेस्रो त्रैमासिकको न्यून वृद्धिले चौथो त्रैमासिक र आगामी वर्षको वृद्धि सम्भावनामाथि चिन्ता बढाएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर घट्नुपछाडि चीनको कोभिड–१९ प्रतिको शून्य सहिष्णुता नीति एउटा कारण रह्यो । यो नीतिअन्तर्गत चीनले अन्य धेरै मुलुकको भन्दा छिटो–छिटो लकडाउन आह्वान गरिरहेको छ । गर्मी महिनामा विभिन्न स्थानीय तहमा कोरोनाको प्रकोप देखिएपछि चीनले धेरै सहरमा लकडाउन र यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसले निर्माण क्षेत्रको उत्पादनलाई मात्र घटाएन, भर्खर उठ्न थालेको पर्यटनजस्तो सेवा क्षेत्रका रोजगार पनि प्रभावित बनायो । चीनको आर्थिक वृद्धिमा देखिएको सुस्तताका लागि महामारी एउटा मात्र कारण थिएन ।
चिनियाँ सरकारको हरित औद्योगिक नीति, घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमाथिको कडाइ र अनलाइन प्लाटफर्महरूमाथिको प्रतिबन्धले पनि वृद्धिमा धक्का लाग्यो । चिनियाँ सरकारले कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन वृद्धिलाई सन् २०३० सम्ममा रोक्ने र सन् २०६० सम्म शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यही लक्ष्यअनुरूप चीन सरकारले बलपूर्वक र अकस्मात् कोइलाले चल्ने तापीय ऊर्जा संयन्त्रको विद्युत् उत्सर्जन कटौती गर्‍यो । केही संयन्त्रमा २० प्रतिशतसम्म विद्युत् उत्पादन कटौती भएको छ ।
यसले प्रभावित क्षेत्रको उद्योगका उत्पादन घटेको छ । सन् २०२० अगस्टमा सुरु गरिएको ‘थ्री रेड लाइन्स’ नीति यो वर्ष झन् कडाइका साथ कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो नीतिले घरजग्गा कारोबारीका हकमा ऋण तथा सम्पत्तिबीचको अनुपात, ऋण तथा साधारण सेयरबीचको अनुपात र ऋण तथा नगदबीचको अनुपात कति रहने भनेर सीमा तोकेको छ । कैयौँ फर्मले ‘रेड लाइन’का कुनै एक वा धेरै लक्ष्य पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । जसकारण बैंक र पुँजी बजारले तिनलाई वित्तीय सहयोग दिन पत्याउन छाडेका छन् । त्यस अवस्थामा फर्मले तिनको सञ्चालनस्तरलाई घटाउने या सरसामान बेचबिखन गर्न थालेका छन् । इभरग्रान्डे वित्तीय संकटमा फसेको चीनको प्रमुख घरजग्गा व्यवसायी भए पनि समस्यामा फस्ने अरू पनि धेरै छन् । घरजग्गा व्यवसायमा आर्थिक संकट आएमा त्यसले स्टिल, सिमेन्ट र घरको सजावट (फर्निचर) तथा बिजुली–पानीसँग जोडिएका उद्योगलाई पनि असर गर्छ ।
सन् २०२१ मा चीनको अर्थतन्त्र समग्रमा वृद्धि हुने भए पनि पछिल्लो तीन महिनाको आर्थिक वृद्धिदर निकै कम रह्यो । आर्थिक वृद्धिदरमा देखिएको सुस्ततालाई उल्टाउन नीतिनिर्माताले नयाँ नियमन र महामारी नियन्त्रणका कदम कार्यान्वयन गर्दा सचेत हुन आवश्यक छ ।
यही वर्ष सरकारी अधिकारीले अनलाइन शिक्षा दिने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखे । त्यस्तै, एकाधिकारवादी हुँदै गएका व्यवसायीमाथि कारबाही सुरु गरे । डाटा संरक्षणमा पनि चीनले कठोर कानुन ल्याएको छ । प्रभावित डिजिटल कम्पनीको सेयर विगत १२ महिनामा आधासम्मले घटेका छन् । सेयरको घट्दो मूल्य समस्याको एक सानो हिस्सा मात्र हुन सक्छ । धेरै डिजिटल फर्म र तिनका आपूर्तिकर्ताले तिनको लक्ष्य र योजना कटौती गर्न थालेका छन् । सयौँ अनलाइन शिक्षाप्रदायक बन्द हुँदा त्यहाँ काम गर्नेहरू बेरोजगार भएका छन् । कार्यान्वयन गरिएका नीतिको उद्देश्य सही छ, तर तिनको कार्यान्वयन शैलीले आर्थिक क्षति पुग्यो । शून्य कोभिड रणनीति खोपको विकास हुनुअगाडि तार्किक लाग्थ्यो । यही नीतिको बलमा गत वर्ष चीनले सकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल पनि भयो । तर, एकपछि अर्को नयाँ भेरियन्टको आगमनका कारण सबै मुलुकले कोरोना भाइरससँगसँगै दैनिक गुजारा चलाउने बाटो खोज्नुपर्छ ।
खोपको दर र प्राकृतिक प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेसँगै यो कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्प बनेको छ । चीनले उसको सबल कार्यान्वयन क्षमतालाई सबै नागरिकलाई खोप लगाउने अभियानमा लगाउनुपर्छ । पटक–पटक लकडाउन गर्ने र सीमानाका बन्द गर्ने कार्यले अर्थतन्त्र र दैनिक जनजीवनलाई त बिथोल्छ नै, यो रणनीति खोपको आगमनपछि त्यति दिगो पनि हुँदैन । हरित औद्योगिक नीतिको सन्दर्भमा ऊर्जा उत्पादन चीनको सबभन्दा बढी कार्बन–सघन क्षेत्र हो । त्यस अर्थमा कोइलाबाट उत्पादन हुने बिजुलीमाथिको निर्भरता न्यूनीकरण गर्दा विश्वकै कार्बन उत्सर्जन प्रयासमा सहयोग हुनेछ । तर, यो परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने अन्य विभिन्न मार्ग छन् । आर्थिक सुधारको चिनियाँ अनुभवमा मूल्य र बजारको शक्तिको प्रयोगबाट संरचनात्मक परिवर्तनबाट हुने क्षति कम भएको देखिन्छ ।
घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा अनुमानित मूल्यवृद्धिलाई घटाउँदा राम्रो हुन्छ, तर घरजग्गा व्यवसायको विकास रोक्दा भने आर्थिक क्षति पुग्छ । अहिले झन्डै ३० प्रतिशत चिनियाँ अर्थतन्त्रको उतारचढावमा घरजग्गा व्यवसाय र निर्माण क्षेत्रको योगदान छ । यसैले वैकल्पिक मार्ग अपनाइयो भने समायोजनले निम्त्याउने आर्थिक पीडालाई कम गर्न सघाउनेछ । उदाहरणका लागि न्यून आय भएका परिवार र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर आउनेहरूलाई सस्तो आवासको प्रवद्र्धन गरियो भने फर्निचर, विद्युत्–खानेपानी उपकरण, स्टिल र सिमेन्टको माग सिर्जना हुन्छ । विद्यालयपछिको ट्युसन अध्ययन कार्यक्रमले धेरै अभिभावकको काँधबाट वित्तीय बोझ कम गरेकाले यसले व्यापक समर्थन पाएको छ । तर, यो क्षेत्रलाई जसरी अचानक प्रतिबन्ध गरियो, त्यसले अन्य क्षेत्रका फर्मका हकमा पनि यस्तै अचानक नीतिगत परिवर्तन हुने हो कि भन्ने डर बढेको छ । यसले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर गर्छ । चीनले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाएर पहिलेकै दरमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छ । त्यसका लागि नयाँ नियमन र महामारी नियन्त्रणको फरक रूपमा बहस तथा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
#चीन # आर्थिक वृद्धिदर
चीनका लागि किन सिफारिस भएन राजदूत ?
मध्यएसिया र चीनबीचको सम्बन्ध : वासिंगटनलाई पाठ
भारत–चीन वार्षिक व्यापार एक खर्ब २५ अर्ब डलर, भारतीय निर्यात बढ्दै
अमेरिका र चीनलाई वार्ता गर्न राष्ट्रसंघीय प्रमुखको आह्वान
फ्लोर क्रस गर्नेलाई कारबाही गर्ने गठबन्धनको चेतावनी
कोभिडले त्रिविका सेवा प्रभावित, डिन कार्यालय नै बन्द
प्र्यांक भिडियो बनाए जेल पर्न सक्ने